Vavaka ho an'i Saint Alejo. ? Handroaka olona, ​​tia ary fahavalo
Vavaka ho an'i San Alejo vita izany rehefa mila mametraka elanelana eo aminay sy ny olon-kafa iray satria rehefa anjarany no nanapa-kevitra ny hampiala azy dia nanao izany izy nefa tsy nitodika.
Vavaka iray izay mameno antsika hery sy manome antsika fanala avy amin'ireo tsy manao soa ho antsika na mampita angovo ratsy.
Mitovy amin'izany ihany koa ny vavaka izay azo atao mba hanesorana ny fisakaizana ratsy amin'ny havana tena akaiky.
Fitaovana iray izay manampy antsika hitazona filaminana ao an-trano izany ary mitombo isan'andro ny finoantsika
1 Iza moa i San Alejo?
1.1 Ny vavaka amin'i Saint Alexius handroaka olona iray
1.2 Ny vavak'i San Alejo mba hampisaraka ny olona sy ny mpitia
1.3 Mba hiaro ny fahavalo
1.4 Fa fitiavana
Iza moa i San Alejo?
San Alejo, izay tamin'ny fiainana dia mpiaro ny Finoana kristiana. Nanahy izy tamin'ny fampianarana ny hafa ny fitsipiky ny finoana. Fijaliana sy nolavin'ny sasany fa ilay mpampianatra ny hafa.
Tsy fantatra ny daty nahaterahany ary ankehitriny izy dia fantatra fa iray amin'ireo Ireo olomasina izay manampy antsika hamaha ny toe-javatra sarotra manokana.
Lehilahy iray afaka nahafoy harena sy fianakaviana noho ny amin'i Kristy, ny finoany tsy azo hozongozonina no nanohana azy rehefa nandeha teny amin'ny arabe tsy nisy tampon-trano na fivelomana izy fa nanana tanjona mafy hampitombo ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny fitoriana ny teniny tamin'ny rehetra. el tontolo.
Nanokan-tena izy indrindra ho an'ny ankizy, hampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra ho takalon'ny sakafo. Ohatra iray harahina amin'ny resaka fitiavana sy fanoloran-tena amin'ny finoana.
Ny vavaka amin'i Saint Alexius handroaka olona iray
Isaorana anie i Saint Alexius
Ohatra sarobidy indrindra amin'ny fitiavana
Nanompo ny olon-drehetra azonao ianao nefa tsy nanantena valiny
Tonga mba hitahy anao izahay
Ary asehoy anao ny fifikirantsika
Satria tamim-panetren-tena sy fanoloran-tena, dia nahazo ny fitiavan'Andriamanitra ianao
Androany aho dia hangataka aminao
Ny hanesoranao amiko tsy olona tsy mendrika, ary mahatonga fanaintainana be loatra amiko izany
Toy ny nandaozanao ny ray aman-dreninao
Mba hahafahana mivoatra ara-panahy
Mialà amin'ny fiainako mankany (anaran'olona), mba hiaina amim-piadanana ianao
Ampianaro kely ny fitiavana nataonao ny namanao
Mba hianatra ny handefitra
Ho an'ireo olona tsy mendrika, ary tsy afaka misaraka isika
Ianao izay eo an-kavanan'Andriamanitra
Mangataka aminao aho mba hivavaka amiko eo imasonao
Hahitana fahasoavana eo anoloako
Ataoko ho olona tsaratsara kokoa aho
Ary afaka mitahy ny fiainako aho
Ary ataovy faly kokoa aho
Satria tena fiainana marina ny mizara an'io olona io
Misaotra anao i San Alejo nitahy
Fa hihaino ny vavaka ataoko
Ary omeo ahy ny fanampianao tsy misy fepetra ..
Tianao ny vavaka San Alejo hampivadika olona iray?
Mety ho amin'ny tranga sasany, ny fialana amin'ny olona iray. asa sarotra tanterahina ary misy toe-javatra izay mahatonga antsika ho akaiky ny olona izay tsy tiantsika.
Izany no antony mahery vaika io vavaka io satria manampy antsika ho tonga olona mamela antsika an-tsitrapo izany.
Miasa raha toa ka manao soa ho antsika izy, toy ny amin'ny ankohonana, toy ny zaza, izay matetika manao fisakaizana tsy tsara ary, alohan'ny hanakorontana ny fahasimbana dia tsara ny manontany an'i San Alejo. olona.
Ny vavak'i San Alejo mba hampisaraka ny olona sy ny mpitia
San Alejo, ianao izay manam-pahefana manala ny ratsy rehetra manodidina ireo olom-boafidin'ny Tompo, mangataka aminao aho koa ny hiala lavitra ... (Lazao ny anaran'ny vadinao)
Avy… (Lazao ny anaran'ny olon-tiany) Miantso anao aho, miangavy anao aho hitondra anao, ho… (Lazao ny anaran'ny olon-tiany) Ento (na) ho any amin'ny faritry ny hadino izy, Enga anie ka tsy hiampita intsony izy ny lalan'i… (Lazao ny anaran'ny namanao).
Toy ny renirano mikoriana, dia mihazakazaka mankany ... (Lazao ny anaran'ny vadinao) Avy amin'ny ... (Lazao ny anaran'ny olon-tianao) Mandrakizay.
Tahaka ny nahatongavany ... (Lazao ny anaran'ny olon-tiany) Ho fiainan'ny ... (Lazao ny anaran'ny vadinao) Ahemony tsy ho ela eo amin'ny fiainany izy.
Tsy afaka miaraka izy ireo na any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, na ao amin'ny efitra fisakafoana, na amin'ny latabatra hohanina, fa tsy afaka ny hanana tsiambaratelo izy ireo raha tsy mahatsapa maharikoriko sy maharikoriko.
Manontany anao aho ry San Alejo, raha mahita izy ireo fa tsy mifankahita, raha miteny izy (... Lazao ny anaran'ny vadinao) Ary ... (Lazao ny anaran'ny vadinao) fa tsy mifankahazo izy ireo ary ny farany misaraka sy maharitra mandrakizay. Miangavy ny fanahin'ny lalana aho hampiato ny làlan-kaleha rehetra avy amin'ny ... (Mitanisa ny anaran'ny vadinao) To ... (Hitanisa ny anaran'ny olon-tianao).
Misaotra anao San Alejo nanatrika ny baikoko.
Miangavy anao aho hamerina ny mpiara-miombona amiko amin'ny fibebahako, ary mampanantena aho ny hanaparitaka an'ity vavaka ity ary misaotra anao noho ny fahasoavana nomena!
Mivavaha am-bavaka amin'i San Alejo amin'ny fisarahana roa finoana.
Amin'ny fifandraisan'ny mpivady, dia misy foana ny antoko fahatelo. San Alejo dia manampy antsika hitazona ny firindran'ny mpivady nefa tsy ovaahan'ny ankolafy fahatelo.
Fantany ny tena lanjan'ny ankohonana ary izany no antony anampiany antsika hanala ireo olona mandrahona hamotika ny tranonay ireo.
Tsy maninona na dia izay a ny fisakaizana tsotra na efa nisy ny fifanarahana tiana, mahery sy mahomby ity vavaka ity.
Mba hiaro ny fahavalo
Ry Saint Alejo be voninahitra indrindra, ilay mpanjaka voalohany tao Aleksandria, aza mahafoy ahy na andro na andro, miangavy anao aho mba hiambina ahy sy handositra ahy amin'ny fahavalo izay manohitra ahy.
Afaho aho ary arovy aho amin'ny herin'ny devoly, ny lehilahy ratsy fanahy, ny biby masiaka ary mpamosavy sy ny mpamosavy. San Alejo, San Alejo, San Alejo, intelo no mila miantso anao aho.
Isaky ny natolotra ahy aho, dia hanafaka ahy amin'ny ratsy rehetra.
Lakroa telo no atolotro anao, izay mariky ny kristiana tsara, ny manasazy ny tanana meloka, amin'ilay tompon-trano izay te-hanao ratsy amiko.
Ity dia hanapaka ny lelan'izay te hiresaka momba ahy.
Miangavy anao aho, ry San Alejo mahery, mba tsy handao ny manodidina ny tranoko aho ary ny zavatra rehetra an-tongotro dia adidiko. Amen. I Jesosy.
San Alejo de León, raha misy olona te-hamadika ahy, enga anie Andriamanitra hamela ny elany hianjera avy ao am-poko ary hanetry tena ho ahy, toy ny nahatongavan'i Jesosy teo am-pototry ny hazo fijaliana.
Raha te handroaka fahavalo ianao dia io no vavaka marina nataon'i Saint Alexius.
Misy ireo mieritreritra fa ny fahavalo dia tsy maintsy mijery akaiky azy ireo, saingy misy ny fahavalo fa aleo lavitra azy ireo, raha izany dia mivantana ny fandrafiana.
Nefa misy tranga lehibe kokoa atao amin'ny olona izay atao mandia namana fa raha ny tena izy dia fahavalony.
Manampy antsika amin'izany ny vavaka ho an'i San Alejo esory lavitra anay izy voajanahary sy tsy misy olana.
Fantany ny tokony hananan'ny fahavaloko akaiky indrindra ary izany no antony nahatongavany ho Olomasina, noho ny fanampiana ny olona hahita fandriampahalemana na dia eo aza ny fiainana sarotra misy antsika. Tsy zavatra mora ny fialana amin'ny fianakaviana sy ny namana fa matetika dia ilaina tokoa izany.
Saint Alexius, ianao izay mahavita ny zava-drehetra, Ianao izay mitantana ny hahita ny zava-drehetra, marina fa marina ianao hanavaka ny fanahiko ary hahafantatra fa tsy misy fitiavana ny fisiako, manampy ahy hanavotra ny fitiavana, nandao ahy ny mpiara-miasa amiko ary ho an'ny iray hafa / na hisolo ahy, Ataovy simba eo anelanelan'izy ireo ny simia, Ataovy mijanona izy ireo.
San Alejo, manaova ny fitiavanao samy hafa, esory aminy / asio, miverena amiko, fa tsy ho tanteranao na tsy nofinofiko ianao, fa tsy eo amin'ny andananao ny olona mahafinaritra, fa izaho no misy eo amin'ny fiainanao, ao amin'ny fiainanao enti-manana, amin'ny eritreritrao ary amin'ny nofinofisinao.
Io fitiavana izay ahy io dia mbola, ny miala amin'ny olon-tsy fantatra, ny olona izay nijoro teo anelanelan'ny tenany sy izaho, asaivo esorina amin'ny sitrapony izy, San Alejo, izay fitiavana izany.
Mangataka aho mba tsy hiaraka aminy / aminy, fa tsy ny ahy intsony ny fiainany, ka miverina, fa tonga ny fitiavako, San Alejo, mitaky izany aho, tsara izy / izy no zava-dehibe indrindra.
Ausculta ny fivavako sy ny fifonako, ary mitsabaka ho ahy.
Ity vavaka ho an'i Saint Alexander amin'ny fitiavana ity dia mahery!
Ny fitiavana sy ny tiana no antony voalohany nanosika azy indrindra ny vavaka. Ny hoe afaka mahita fitiavana sy mamorona trano, fianakaviana iray feno firindrana ary mahita ny fitomboan'ny ankizy dia fotoam-piainana tsara tarehy izay mendrika hivelomana.
Na dia izany aza dia milaza zavatra hafa noho ny hafa izy ary izany dia noho ny finiavana ratsy izay toa mitombo ankehitriny ao am-po.
San Alejo, fony izy teto an-tany dia afaka niaina izany karazana fitiavana izany satria nanana fianakaviana izy talohan'ny nanolorany ny tenany tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra.
Tsy nifankahazo tao anefa ny fitiavana fa nitombo sy niova ho herin-tsaina izany ka mandraka ankehitriny dia manao fahagagana mahagaga.
Ny fangatahana fahagagana hahitana ny tena fitiavana dia fihetsika izay hanana valiny haingana satria ny zavatra rehetra angatahinay amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy dia homen'ny ray antsika.
Hararaoty ny herin'ny vavaka rehetra nataon'i San Alejo!